Isitebhisi seLadders - Abakhiqizi baseChina nabathengisi
Steel Material Isinyathelo isitebhisi Isitulo Nge Handle SSL03
I-SSL03 iyisito esidingekayo sezinyathelo zensimbi somndeni. Usayizi ovuliwe ngu-570 * 465 * 845mm, kanti usayizi ogoqiwe ngu-465 * 80 * 935mm. Akuthathi isikhala esiningi lapho kugcinwa. Lesi situlo sesinyathelo sisebenza kakhulu. Lapho izinto ziphakeme kakhulu ukuthi ungazifinyelela noma ngabe ume ezinzwaneni zakho, ungakwazi ukuxazulula le nkinga kalula ngokuzinyathela. Lesi simo sivame ukuba khona emndenini, ngakho-ke asisoze sasebenza nguwe.
Isitebhisi Sokukhuphuka Isitebhisi se-CSA ANSI Kuvunyelwe Inhloso Eningi 5 Isinyathelo Esiseceleni Esilodwa se-Fiberglass Ladder
I-PFGH105 iyisitebhisi sesiteji se-fiberglass esingu-7 ft esinezinyathelo ezi-5, ukuphakama kokuvula kungu-2020mm, ukuvala ukuphakama kungu-2180mm, kunesisindo esingu-13.3kg, umthwalo olinganisiwe ungamakhilogremu angama-300 (136kg), izinga lokulayisha lizinga le-IA. Ipulatifomu yayo enkulu ibanzi futhi ayisheleli, inikeza indawo yokusebenza ephephile nenethezekile yabasebenzi.
I-fiberglass ephuzi nebomvu i-twin step ladder FGD105HA
I-FGD105HA ekhiqizwa yi-Abctools iyisitebhisi se-fiberglass twin step esingasetshenziswa ezungeze ugesi. Ingamasentimitha ayi-6 ubude futhi inezinyathelo ezi-5, ukuphakama okuvulekile kungu-1730mm, ukuphakama okuvaliwe kungu-1850mm, kanti isisindo singu-12.8 kg. Lesi sitebhisi singasetshenziswa ezinhlangothini zombili, esivikelekile futhi esizinzile ukwedlula isitebhisi sohlangothi olulodwa. Indawo yesikhulumi ebanzi phezulu ingasetshenziswa ukubeka amathuluzi namabhakede amakhulu kakhulu, okulula kakhulu ukusebenza;
FGHP103S 300lbs umthwalo umthamo fiberglass yesikhulumi isinyathelo isitebhisi
I-FGHP103S ekhiqizwa yi-Abctools iyisitebhisi sesikhulumi. Inezinyathelo ezi-3. Usayizi ovulekile ngu-1740mm, usayizi ovaliwe ngu-1880mm, kanti isisindo ngu-10.9kg. Isilinganiso sokulayisha luhlobo lwe-IA, umthamo wokulayisha ungama-300lbs. Uzimele wenziwe nge-fiberglass engasebenzi. Ngakho-ke, ilungele ukusetshenziswa ezungeze ugesi. Ipulatifomu enkulu izwa sengathi umile phansi, futhi indawo yokusebenza ye-4X ikuvumela ukuthi usebenze kunoma iyiphi indlela.
I-FGEH40 iyisitebhisi eselulekayo somsebenzi osindayo esinomthwalo olinganisiwe wohlobo lwe-IA, okusho ukuthi unamandla omthwalo wamakhilogremu angama-300. Inezinyathelo ezingama-40 sezizonke, ububanzi obuyisisekelo obungu-470mm, ubude obeluliwe obungu-11400mm, nesisindo esingu-40kg.
Uhlobo lwe-6 ft uhlobo lwe-IA 300 lbs lokulayisha unxantathu ongasongeka wesitebhisi se-fiberglass
Isitebhisi sesinyathelo se-FGH105 fiberglass esikhiqizwa yi-Abctools senziwe nge-fiberglass engahambisani futhi sinesisindo esingu-9.5 kg. Inokuphakama okuvaliwe okungu-1860mm nokuphakama okuvulekile okungu-1730mm. Lesi sitebhisi esinemisebenzi eminingi siyadingeka kunoma iliphi ikhaya. Kusukela ekupendeni igumbi kuya ekushintsheni ama-light, abaninikhaya bathanda ukuba lula kwaleli ladi. Kukhona itafula lamathuluzi ngaphezulu kwalo, elingabeka amathuluzi amaningi, futhi ungaqedela umsebenzi ngokuzimela ngaphandle kwesidingo sokuthi abanye badlulisele amathuluzi esandleni sakho.
I-AL102 Aluminium eshalofini yesiteji isitebhisi isitebhisi se-aluminium sokugoqa
I-PALH102 ekhiqizwa yi-ABC iyisitebhisi sepulatifomu se-aluminium esinomthwalo wama-300 lbs (136 kg). Inesisindo esingu-7.5kg, ukuphakama okuvaliwe okungu-1340mm nokuphakama okuvulekile okungu-1232mm. Uhlobo lwesitebhisi seplatifomu i-IA 2 yesitebhisi yiyona kuphela isitebhisi esihlanganisa konke ukutholakala kwesitebhisi esihlangene sesitebhisi kanye nesitebhisi sezinyathelo. Ipulatifomu yosayizi omkhulu ilungele upende, amathuluzi, noma i-hardware.
4 Isinyathelo esisodwa ohlangothini lwesiteji sesinyathelo se-aluminium esigoqekayo nesibambo neshalofu sokusetshenziswa ngaphakathi nangaphandle
I-AL204 ekhiqizwa yi-Abctools iyisitebhisi sesinyathelo se-aluminium esinomthwalo wamakhilogremu angama-225. Isisindo sayo singu-6kg, usayizi ovulekile ngu-1438mm, kanti usayizi ovaliwe ngu-1565mm. Ingafakwa ithileyi elilungele ukubeka amathuluzi noma amathini okupenda, futhi ifaka nezikhala zokubeka upende noma ama-roller.
Amayunithi Wokugcina Amasheya Okuhweba Ishelufu Yesitoreji Esincane Amayunithi Wokushefa Amakamelo Okulala Amashalofu Ekhaya I-White Storage Shelf Unit Indawo Yokubeka Amashelufa